नयाँ वर्ष, जुडशितल र प्रधानमन्त्रीको रारा सम्बोधन – Shirish News
नयाँ वर्ष, जुडशितल र प्रधानमन्त्रीको रारा सम्बोधन
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले नया वर्ष २०७५ को प्रारम्भ कर्णाली प्रदेशको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल राराबाट गरेका छन् । पछिल्लो समयमा धर्तीकी रानी पर्यटकीय सौन्दर्यकी खानीको परिचय बनाएको रारा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा चर्चित छ । अझ कालिकोट र जुम्लाको सीममा पर्ने नाग्मघाटदेखि सिँजा उपत्यका छिचोल्दै मुगुको गमगढीसम्म पुग्ने मोटरबाटोको निर्माणपछि रारामा सामान्य मानिसको पहुँच बढेको छ र यो पहुँच राम्रैसँग बढेको अनुभूति त्यतिखेर हुन्छ जब कर्णालीभन्दा बाहिरका व्यक्तिको बाक्लै उपस्थिति यहाँ हुन थालेको पाउन सकिन्छ । यस अर्थमा रारा चर्चित छ र अझ चर्चित भइरहेको छ ।
राराको यस सम्बोधनअघि लगत्तै प्रधानमन्त्रीले छिमेकी राष्ट्र भारतको भ्रमण सम्पन्न गरेको ज्ञातव्य छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमार्फत् राष्ट्रियता सम्बद्र्धनको कुरा पनि गरिएको छ, तर यो कसरी सम्बद्र्धन हुन सक्छ भन्ने कुनै स्पष्ट धारणा छैन । नयाँ वर्षको पहिलो दिन पारेर प्रधानमन्त्रीले राराबाट सम्बोधन त गरे तर नेपालमा विविध संस्कृति छन् जसमा विविध दिनमा नयाँ वर्ष मनाउने गरिन्छ ।
सन्दर्भ राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले नयाँ वर्षको प्रारम्भ राराबाट गरेकोको हो । यसलाई समग्र राष्ट्रले नै नीतिगतरुपमा नया वर्षको प्रारम्भ राराबाट गरेको मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले नया वर्षको प्रारम्भको अवसर पारेर यहीँबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । बरु यस प्रयासलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका अन्यत्र देशमा पनि सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले सम्बोधन गर्न वा बैठक बस्न यस्ता स्थानको छनोट गर्ने गरिएको पाइएको छ । नेपालमै पनि माधव नेपालको प्रधानमन्त्रित्वकालमा सगरमाथाको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषदको वैठक भएको इतिहास छ । यस्ता प्रयासले समग्र राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्छ, देश र जनताको आवश्यकतालाई छुन्छ, नीतिनिर्माणमा महत्वपूर्णले प्रभाव पार्छ भने अन्यथा किन मान्ने ? तर यी सबै कुराको सुनिश्चितता भने खोजिनुपर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले रारालाई केन्द्रमा राखेर घोषणा गरेको कर्णाली पर्यटन वर्षको प्रारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्रीले देशलाई सम्बोधन गरेका हुन् । कार्यक्रमअघि प्रधानमन्त्रीको सम्भावित सम्बोधनबारे निकै चर्चा थियो । तर सम्बोधनपछि त्यसले खासै चर्चा पाउन सकेन । समग्रमा प्रधानमन्त्रीले आफ्रनो व्यस्ततम समयमध्ये महत्वपूर्ण दुई दिन रारा सम्बोधनका लागि खर्चिए । कम्तिमा कर्णालीका जनताका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । निश्चय नै यो प्रयासले प्रधानमन्त्री र कर्णालीका जनताबीच एक किसिमको आत्मियताको सम्बन्ध विकसित भएको हुनुपर्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर देशका अन्य भूगोलका जनताले भावी दिनमा यस्तै अवसर पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? त्यो हेर्न भने बाँकी छ ।
माथि उल्लेख गरिएका कुरा प्रकारान्तरले तपसिलका कुरामात्र हुन् । मुख्य कुरा हो, प्रधानमन्त्रीको भाषण र त्यसले प्रवाह गरेको सन्देश । सामान्यतया विश्लेषणको प्रयास गर्दा सन्देशमा खासै नयाँपन छैन । त्यही पुरानो कुरालाई नै नयाँ ‘प्याकेजिगं’ गर्न खोजिएको भान हुन्छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा छन्, जो वास्तवमा कर्णप्रिय छन् । तर त्यसका सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट खाका र कार्यक्रम छैन । त्यसो त यही आधारमा आलोचना गर्ने बेला अहिले नै भइसकेको छैन । सरकारको आर्थिक आय—व्यय (वजेट) विवरण र नीति तथा कार्यक्रम आउन बाँकी नै छ । त्यसपछिमात्र केही टिप्पणी गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ । यस सन्दर्भमा एउटा कुरालाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ, अर्थमन्त्रीमार्फत् जारी आर्थिक श्वेतपत्रबाट उत्पन्न निराशाजनक अवस्थालाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले आशा जागृत गराउने प्रयास गरेका छन् । तर यस समबन्धमा कुनै कार्यक्रमको संकेत नआउनुले भने फेरि पनि निराशाकै सञ्चार गरेको छ ।
राराको यस सम्बोधनअघि लगत्तै प्रधानमन्त्रीले छिमेकी राष्ट्र भारतको भ्रमण सम्पन्न गरेको ज्ञातव्य छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमार्फत् राष्ट्रियता सम्बद्र्धनको कुरा पनि गरिएको छ, तर यो कसरी सम्बद्र्धन हुन सक्छ भन्ने कुनै स्पष्ट धारणा छैन । नयाँ वर्षको पहिलो दिन पारेर प्रधानमन्त्रीले राराबाट सम्बोधन त गरे तर नेपालमा विविध संस्कृति छन् जसमा विविध दिनमा नयाँ वर्ष मनाउने गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीले कर्णाली संस्कृतिअनुसारको नयाँ वर्षलाई सम्बोधन गरेजस्तै अन्य संस्कृतिअनुरुपको नयाँ वर्षलाई समबोधन गर्ने कि नगर्ने ? राष्ट्रियतालाई नया ढंगले परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा यस प्रश्नको उत्तर अपेक्षित छ । सन्दर्भ नयाँ वर्षकै हो । मधेशमा नयाँ वर्षको प्रारम्भ जुडशितल, सिरुवा, वैशाख संक्रान्ति, वैशाखीजस्ता सांस्कृतिक महत्वका पर्वसँग सम्बन्धित छ । तर राज्यले यी सबै सांस्कृतिक अनुष्ठानलाई विगतमा कहिल्यै पनि महत्व दिएन । अब संघीय सरकारको ध्यान यसतर्फ आकृष्ट हुनु जरुरी छ र सांस्कृतिक नवोत्थानको सिर्जनात्मक नीति तय गर्नु अपेक्षित छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको परिभाषाको सन्दर्भमा यी विषयमा वहस आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका सम्बन्धमा खासै प्रश्न उठ्ने स्थिति नहुन सक्छ तर प्रक्रियाका बारेमा केही जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । काठमाडौबाट व्यक्तिको ठूलै लावा लस्कर र प्रविधिको भीड रारामा जम्मा गरिएको थियो । ठूलै खर्च भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसअनुकूलको रारा सम्बोधनको औचित्य सावित हुन सक्यो कि सकेन भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उव्जिन्छ र यसको उत्तर सम्बन्धित निकायले दिनु आवश्यक छ । सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ठूला कुरा गरिरहेका सन्दर्भमा रारा सम्बोधनका क्रममा कति खर्च भयो र त्यहाँ गएका व्यक्तिहरुको उपस्थितिको औचित्य के हो भन्ने कुराको पुष्टि सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । यसले निश्चय पनि सरकारले ग्रहण गरेको सुशासनको नीतिलाई नै वल पुर्याउनेछ । होइन, यी विषयलाई मुल्तवीमा राख्ने प्रयत्न हुने हो भने सुशासनको अभियानमात्र हातीको देखाउने दाँतमा सीमिति हुनेछ । यो एउटा अवसर हो, जसको लाभ प्रधानमन्त्रीले लिन सक्नेछन् र आफ्नो सुशासन अभियानमा एक ढुंंगा थप्न सक्नेछन् ।
नव वर्ष शुभ होस । आज मधेशमा जुड शीतल पर्व हो । यस पर्वअनुसार नया वर्षको पहिलो दिनको साँझ पकाइएको खाने कुरा दोस्रो दिन अर्थात् भोलीपल्ट खानु पर्छ । यसअनुसार वासी खाने यो पर्वलाई ‘वासि पावनि’ पनि भनिन्छ । यस पर्वमा दोस्रो दिन विहान चूल्होलाई विश्राम दिइन्छ । यस्तै घरका श्रेष्ठजनले अन्य सदस्यका टाउकोमा चिसो पानी छम्किन्छिन् । यी सबै प्रक्रियाको आशय, अब गर्मी मौसम सुरु हुँदैछ, यस मौसममा कसैलाई गर्मी नहोस र सँधै सबैले शितलताको अनुभव गरुन । शितलताले मानिसको वुद्धि विवेकलाई सकारात्मकरुपमा प्रभावित गर्दछ । मान्यजनले आवश्यक र उचित बाटो देखाउन । जुडशितल पर्वका यी सन्देश हाम्रा नीतिनिर्माताले पनि अनुशरण गर्न सकुन र आवेशमा बुद्धि विवेक नगुमाउन । सरकारले सबैको नेतृत्च्व गर्न सकोस । शुभकामना ।
एभरेष्ट पेपर मिलले टेरेन सर्वोच्चको आदेश : विषाक्त पानी नदीमा मिसाउने काम जारी